Mhanya Android zvishandiso paLinux nekuda kweGoogle Chrome | Linux Vakapindwa muropa
Hapana chikonzero chekutora iyo SDK Android, hapana zvirongwa kana kugadzirisa chero chinhu. Iye zvino zvinoita kumhanya Android maapplication pane chero anoshanda system iwe aunogona kumhanya bhurawuza Google Chrome. Uye zviri nyore kwazvo sezvatinotsanangura muchinyorwa chino.
Uku kubudirira kukuru kunokonzerwa nekuedza kukuru uye nebasa renharaunda yekusimudzira, izvo zvaita kuti Google browser ibatidze pasina dambudziko. Imwe nguva yapfuura zvakaziviswa kuti mamwe maapplication aigona kuiswa sei kubva Android Mu Chromebook, isu tatoziva kuti vane Chrome OS inoshanda sisitimu yakavakirwa paGoogle Chrome uye neLinux kernel.
Zvakanaka, ikozvino rimwe danho rakatorwa uye akawanda maapplication eApple anotenderwa kumhanya kubva kune chero system neGoogle Chrome. Kuti tiite izvi tinofanirwa kurodha pasi yekuwedzera kweChannel inonzi ARChon nguva yekumhanya.
Vlad Philippov anga achitarisira kutiunzira ichi chitsva kuti tikwanise kumhanyisa maapplication eApple muChannel. Iwe unongoda kuve neiyo Chrome vhezheni yakakwira kupfuura v37 ye64bits. Chinhu chakashata ndechekuti kuwedzerwa uye zvinyorwa zvekumisikidza zvemaapps hazvina kugadzikana kunyangwe nekuti zviri kuvandudzwa, saka unogona kutarisira kumwe kutadza.
Kamwe kuwedzerwa kwaiswa iwe uchazoda ma APK yezvibasa zvaunoda kuisa. Zvakanaka, zveizvi, saiti yakagadzirwa neinorondedzerwa maAPK akagadziridzwa kuitira kuti vagone kuiswa neARChon nguva yekumhanya. Unogona kuzviwana kubva pano. Ndinovimba munguva pfupi iri kutevera ichavandudza nekuita kuti kuwedzerwa uye zvinyorwa zvive zvakadzikama uye isu tichava nemamwe maapp
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekumhanyisa Android maapplication paLinux zviri nyore kwazvo